Iran oo shaacisay tallaabada ay ugu aargudi doonto dilkii Qasem Soleimani | Marsa News
Iran oo shaacisay tallaabada ay ugu aargudi doonto dilkii Qasem Soleimani
Hargeisa:(Marsanews) Lataliyha arrimaha milateriga ee hogaamiyaha Iran, Ayatollah Ali Khamenei ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay telefishenka CNN ee dalka Mareykanka waxaa uu kaga hadlay tallaabada xigta ee laga fili karo Iran, kadib markii Mareykanka uu dilay Qasem Suleimani oo ahaa sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada ugu awoodda badan Iran.
Jeneraal Hossein Dehghan ayaa sheegay in Iran ay aargoosan doonto, iyadoo toos u bartilmaameedsan doonta “xarun milateri oo uu Mareykanka leeyahay”.
Lataliye sare Dehghan oo sidoo kale horay usoo noqday wasiirkii gaashaandhiga ee Iran ayaa sheegay in tallaabada xigta ay ka imaan doonto Iran, balse aanay ahayn mid laga sugi doono kooxaha taabacsan ee ka dagaalama gobolka.
“Waxaa laga yaabaa in la is yiraahdo tallaabada xigta waa hawgal dadban, waxaan leenahay Trump annaga ayaad si toos ah noo soo weerartay, annaga ayaana tallaabo toos ah kaa qaadi doona.”
Image captionKumanaan u baroordiiqaya Qasem
Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twiter-ka ku qoray “in haddii Iran ay weerarto saldhigyada Mareykanka ama muwaadin Mareykan ah uu dalkiisa uga jawaabi doona hubka casriga ah ee uu heysto!”
“Waxaan Iran kula talinayaa in aysan ina weerarin, haddii ay ina weeraraan, annaguna waan weerareynaa”, ayuu Trump ku qoray bartiisa Twiter-ka.
Haseyeeshee arrintaas waxaa ka jawaabay Dehghan oo sheegay in Mareykanka uu billaabay dagaalka, dhameystirkana ay leedahay Iran.
Dehgahn waxaa kale oo uu ka jawaabay hanjabaad kasoo yeertay madaxweyne Trump oo ahayd in Mareykanka uu bartilmaameedsan doonaa 52 xarumo dhaqameed, haddii ay Iran qaado tallaaba aargoosi ah.
Waxaana uu yiri “haddi ay 52 bartilmaameedsadaan, 300 oo aan gaari karno ayaan annaguna bartilmaameedsaneynaa oo ma jiri doonta saldhig milateri oo uu Mareykanka leeyahay oo nabad ahaan doona, ma jiri doonta askar Mareykan ah oo nabadgeli doonta, ma jiri doona Markab dagaal oo uu Mareykanka leeyahay oo nabad ahaan doona.
“Dhammaan shacabka Iran waa Qasem Soleimani, qofka hadda isaga lagu badelayna waxaa uu ka hoos shaqeynayay inkabadan labaatan sano, waxaana uu aaminsan yahay qaacidadii iyo iyo xeeladii uu lahaa Qasem,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Image captionBarlamaanka Ciraaq oo meelmariyay qaraar ka dhan ah Mareykanka
Dhanka kale, madaxweyne Donald Trump ayaa ku hanjabay in cunaqabateyn aad u ballaaran uu kusoo rogi doona Dowladda Ciraaq, haddii ay dhaqangeliso qaraar uu meel-mariyay barlamaanka dalkaas.
Arrintan ayaa lala xirirnayaa dilkii uu Mareykanka gudaha dalka Ciraaq ugu geystay Jeneraal Qasem Suleimani oo madax ka ahaa cutub kamid ah ciidamada ugu awoodda badan Iran, waxaana dilkiisa ay sii hurisay xiisadii awalba u dhaxeysay Iran iyo Mareykanka.
Kulan aan caadi ahayn oo uu baarlamaanka dalkaas yeeshay maalin kahor ayaa xildhibanaada barlamaanka waxay dowladda ugu baaqeen in dalkaas ay ka saarto ciidamada ajnabiga ah ee jooga, sidoo kalena ay ka laabato codsi ay xukuumadda horay ugu gudbisay xulafada uu hogaamiyo Mareykanka oo dhigaya in xukuumadda Baqdaad ay ka caawiyaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish.